Watshata umfazi ukuhlangabezana ads - IVIDIYO INCOKO zwelonke! Onke amazwe, iinqwelo, lonke ihlabathi.
Kwaye abo bathi ezi izicwangciso zichanekile
Nika Facebook kwi block, unye ukuba kuya kuqala ukuba umntu kufuneka azi valaHayi ukuba wena ungafuni ukuhlangabezana bathambe, intelligent kwaye solvent. Kodwa ufuna, ezele virtues, kuya kufuneka ukuba abathengi ngokwakho romance.Kuba kum, umbuzo nokuba umfazi unako kuba initiator ka-Dating, kwaye nokuba ufuna kubo kuba obvious,"utshilo psychologist Jana. - Umfazi rhoqo ukuphenjelelwa umntu, kwaye loluphi uhlobo isicwangciso-buchule yena isebenzisa ngu enxiba eyona dress okanye suits kunye kunikela ka-d ngu iinkcukacha." Phezu kwezi efanayo imimandla kwaye ingaba scratching kweentloko zenu ladies. Ngokunxulumene uphando, uninzi ikholelwa ukuba elimfiliba kulula ukufumana abahlobo ("iqela apho wonke umntu uyayazi ngamnye enye, asiyonto inzima ngakumbi ukuza kuwo maniac"), emsebenzini ("apha ndinguye kaninzi kwaye kuba sebenza ngokujikeleza ixesha"), kwi-Intanethi ("ithuba, kunjalo, incinci, kodwa kulula ukuhlala incognito - alikwazi ukwahlula njengoko scary njengoko nawe indlela umntu kwi bar") kwaye iindawo a ngokwesiqu congestion kwabasemzini ("umzekelo, mna waba lilungu yacht club - ubuncinane ukhuphiswano kwaye ezininzi guys kwi-ezimanzi t-shirts"). Kodwa into malunga iinkwenkwezi, iivenkile kunye icawe lectures ngomhla Polytechnic, ucela.Kwaye Jikelele: njani. Elvira, psychologist, mfundisi NLP kwaye umbhali we uqeqesho"Ukuziqhelanisa ka-Dating kwi-big isixeko"uza dispel yenu yonke doubts. Mhlawumbi linda kude kube nguye fit. Khumbula: mangaphi amaxesha ebomini bakho ukhe wala ukunika umntu ifowuni kwaye nje ukubiza igama.
Ngoku beka ngokwakho kwi-izihlangu ye-avareji umntu ukuba ungathanda kuba budlelwane.
Xa mna drove kuye ukufumana acquainted kwi-ezothutho, njenge nani, saliwe ngalo lonke jika. Ngo neminyaka engama- (a ke ngoko ukusebenza ngcono kunokuba phambi) yena ndabona ukuba kwenzeka isibali zonke silly, kwaye ukususela ngoko, ukulinda ngomonde umfazi herself ingaba kumnika ukuqonda ukuba yena ufuna ukuya kuhlangana nani. Ke ngoko, umsebenzi wakho kukuba yenza imeko apho umntu uya baqonde ukuba wena musa engqondweni Dating.Kwaye apho kuya kwenzeka - ayinamsebenzi: ukuhlangabezana uthando ingafunyanwa kwi-supermarket, stadium, kwaye nkqu intle Bay downstairs neighbors. Kuza uninzi ezingafanelekanga. Musa ufuna intrude. Kunjalo, kulungile, xa umfazi uyayazi indlela kuba embarrassed, kodwa kakhulu engalunganga xa yena uthi yena uya zange kuhlangana yokuqala. A rolling ilitye akukwazeki ukufumana nkqu uninzi emelanayo indoda nomfazi. Ukuba ucinga ukuba awuyazi njani ukuhlangabezana opposite sex, thatha kwaye ukufunda. Kunjalo, woloyiso zabo complexes nomama wam ke ufakelo lwe-uthotho"decent girls musa"kuba ukusebenza ngomhla kwabo. Ukuhlola kunikwe ukwenza fears, reconsider, end, ezifunwa society nosapho imiyalelo.Oko bekuya kuba ngenene, kulula - nibe kuba nkqu ukuya a psychologist okanye psychoanalyst. Kodwa kuba abafazi kunye kugqitywe yangaphakathi iingxaki inkqubo amava - elula abantwana ke iphazili. Yiya kuphulukana nayo umlinganiselo kuqala, kwaye kwangoko - nje ukufumana acquainted. Sonke kufuneka zethu beliefs, yintoni ifanele, kwaye baya kunika zethu yangaphakathi iimpikiswano."Get watshata, mna kufuneka ibe beautiful noqoqosho. Kwaye andikho elimnandi kakhulu kwaye ndiyakuthanda kuba lazy. Ngoko ke, andikho watshata", - thinks i kubekho inkqubela, kwaye, kunjalo, akunjalo umngcipheko kuhlangana anybody. Mhlawumbi i-ummelwane ke cottage, othe wena liked, ninoyolo ukuba ukuxoka ngaphandle kuye kwi sofa nocwangco a meal ezimbini ngexesha restaurant. Ngokufutshane, ibandakanye yakho ngaphakathi imiqobo - kwaye abantu baya babambisa phezulu.
Njengoko ephambili i-ukrainian Dating inkonzo,"e-Asia Dating"sele zidityanisiwe amawaka omnye abantu nge-i-ukrainian abafazi jikelele ehlabathini, owenza ngayo omnye zephondo kule ndawo ukuba uninzi yenziweUkuba osikhangelayo i-ukrainian icacile kuba friendship, Dating okanye ezinzima budlelwane, ungafumana yakho olugqibeleleyo thelekisa apha. Yamazwe ngamazwe i-ukrainian Dating premium "E-Asia Dating"yinxalenye yenziwe womnatha"Dating Media", apho isebenza ngaphezulu kwama- Dating zephondo kunye elungileyo reputation. Nge ukuzinikela ukuqhagamshela icacile kwihlabathi liphela, thina kunizisa e-India. Embalwa ezinye zephondo unako sininike incredible ithuba incoko kunye amawaka i-ukrainian kwaye Empuma European abafazi abo bamele ikhangela uthando. Imbono yethu kukuba uncedo Kuwe ukufumana olugqibeleleyo iperi, ngaphandle apho ehlabathini Ufuna. Qala Yakho impumelelo ibali kwi"e-Asia Dating" Njengoko ephambili Dating site, thina ngempumelelo dibanisa i-lonely abantu ukusuka zonke phezu kwehlabathi. Amawaka ndonwabe amadoda nabafazi kufuneka ifunyenwe zabo, umphefumlo mate kwi"e-Asia Dating"kwaye kufuneka usharedi wabo kunye nathi. Khangela ngokusebenzisa enkulu inani impumelelo stories apha. Kuba i-exciting, ekhuselekileyo kunye eyodwa amava i-ukrainian Dating inkonzo, ukungena kuba free namhlanje.
Dating abakhoyo phezu
Baya phembelela kwaye kunika uxolo ngamnye ulutsha
Abo phezu, Dating ngamanye amaxesha k ubonakala ngathi leqela le nkqubo."Ividiyo incoko"Yakho fears iya kuba dispelled
Ukwenza entsha abahlobo kunye nabo bangengabo phezu, kwiwebhusayithi yethu ethi, yi-ngokulula unqakraza free ubhaliso.
Inika Kufuneka ingabi kuphela ukufikelela ephambili iinkonzo, kodwa kanjalo doors kwi-world of exciting unxibelelwano. Umdla acquaintances kunye nabo bangengabo phezu Inyaniso uthando kwaye enyanisekileyo friendship abathembekileyo companions womntu kulo lonke ubomi bakhe. Ukuba acutely bazive i-incasa wobomi kwaye oqaqambileyo imibala yehlabathi, ngamanye amaxesha nokungabikho entsha acquaintances. Andazi apho ukufumana abantu, unxibelelwano kunye lowo uza kuba umdla kwaye glplanet. Kwi Dating site"Ividiyo incoko"uyakwazi lula ukufumana ezo phezu abantu kumadoda, kodwa nangona kunjalo lovers wobomi. I-ithuba ukufumana companion ukuba bahambe kunye, umhlobo okanye soulmate kuba ngamnye kwaye wonke visitor i -"Live incoko". Noko izizathu ukwenza acquaintance kunye nabo bangengabo phezu,"Ividiyo incoko" A. inani abasebenzisi. Kwiwebhusayithi waba eziliqela million yabantu, kwaye oku inani likhule yonke imihla. Phakathi kwabo bamele amawaka abo amadoda nabafazi phezu abo ufuna baxubane. Convenient ukukhangela iqabane lakho. Luquka amakhulu parameters kwaye nuances ye-exterior ukuba ihlale ngexesha elingelilo lokuhlala imisetyenzana yokuzonwabisa ukuba ikuvumela ukuba ingaba umdla amava kwaye na inkunkuma ixesha meaningless unxibelelwano. Phezulu isenzo sempumelelo.
Ngokunxulumene-manani, uninzi lwethu abasebenzisi fumana abafanelekileyo interlocutors, wonyulwa friendships kwaye romanticcomment iintlanganiso kwi-real ihlabathi.
"Asian Dating"le yeyona ndlela entsha kwaye free ividiyo usetyenziso Dating kunye incoko kwaye enkulu, indlela kuhlangana abantu engqongileyo ezinemigodiYenza entsha abahlobo, incoko kunye nabo, bahlangana omnye abantu, Dating, incoko, beka phantsi ngaphandle, flirt, ukuwa ngothando kwaye ke kuba ngesondo. "Asian Dating"oku eyona ndawo foreigners abajikelezayo ukuya e-Asia, ezifana ne-China, Japan, Korea, Persia, Ethailand, Vietnam, Gambia kwaye Malaysia ukuhlangabezana wobulali omnye amadoda nabafazi. Imisebenzi eyodwa"Asian Dating", uyakwazi kuhlangana abantu ngqo ngo kunokwenzeka zabo iividiyo.
Ukusekwa eyobuhlobo ubudlelwane phakathi, iintlanganiso kunye bolunye uhlanga kwaye unxibelelwano ayizange sele ngoko ke fun. Khangela clips abantu abakufutshane kwaye xa unqwenela umntu, musa kuba ukuba neentloni, nje kuthi molo.
Ngokukhawuleza emva koku, uza akukho ixesha elide kangakanani xa uhamba wedwa, ngenxa yokuba uza incoko, flirt kwaye mhlawumbi nkqu kuhlangana kunye lonely bolunye uhlanga. Ke free kwaye fun app kanjalo sele amagumbi-intanethi kwincoko apho wonke umntu unako thetha nokuseka nabo Jonga a ividiyo abantu abakufutshane kwaye ngamanye Asian izixeko. Xa ubona umntu uyafuna, nqakraza kwi intliziyo iqhosha elisezantsi ilungelo yembombo. Xa ufuna kwakhona liked lo mntu kuwo a iperi, kwaye uyakwazi ngqo thumela i-SMS ukuba lo mntu. Unako kanjalo kuhlangana abantu iqela incoko tab (ephezulu ngasekunene). Nqakraza imifanekiso abantu phantsi iqela incoko ukubonisa zabo inkangeleko okanye yenza kubo Musa xana: ngokungafaniyo nezinye ii-apps kuba Dating,"Asian Dating"free kwaye ikuvumela ukuba badibane nabantu abakufutshane ngaphandle ukubhatala na commissions. Yenza entsha abahlobo ezikufutshane okanye jikelele ehlabathini wethu amagumbi iqela incoko okanye ngokudala iipere kwaye sebenzisa zethu umsebenzi"ibhokisi yeposi private".
South Carolina Dating zephondo
Dating amadoda nabafazi Emzantsi Carolina sele isakhono somhlaba ezininzi nezinye inkonzo imizi-mveliso ezifana kwi-IntanethiNgapha Dating kwaye persuasion, kwi-Intanethi zibonakele wadala isidingo nomdla usapho elizayo. Ngokunxulumene-manani, ngowama, abantu baba divorced okanye atshate. Kuya kuba omkhulu isithuba. Ujonge phambili ukudlala indima ebalulekileyo ngoku njengokuba ithelekiswa iqabane lakho. Makhe fumana Dating site Afrika Carolina Isiqingatha ukuchongeka inyaniso, njengoko, i-strongest kwi-uphuhliso budlelwane nabanye.
Sinike free weziganeko zeenqanawa nawuphi na umntu ukuba ukuhlola ukungqinelana ukuba bonisa site yethu.
Emzantsi Carolina ke entsha inqanaba ezinzima budlelwane nabanye kuba i-intanethi Dating, kwi ephikisana, zonke iinkonzo ezidweliswe kwi-site zinikezelwa kuba free kwaye kunzima ukwenza umboniseli ndonwabe.
Cancer yi deception. Ukuba akunayo i-monk okanye hermit, ke, ngenxa yokuba izinto stressed. coping kunye loneliness ingxaki kwaba lula kunokuba kunye bale mihla iimeko abaphila, kwaye kwesinye isandla, kwi ephikisana, inzima ngakumbi. Njengoko uyazi, bethu oomawomkhulu, abazali, Yokohama Ali okanye idityanisiwe kwi phambili kwethu kwi-i-valentine ngu Mhla. Layo organizers ingaba uluntu umdlalo. Kukho kakhulu abantu abaninzi apho.
Kolu luvo, akunjalo lula kwi-bale mihla kwisizukulwana. Hayi ke abaninzi abahlali-ezininzi ibali izakhiwo okanye neighborhoods. Ngoku kukho ngaphezulu ezilungele okkt. Oko kukuthi, kukho, kukho uncwadi ufuna ukuya. Kukho umntu apha ongelilo anomdla inkampani yethu ngamaxesha onke. Inkampani yethu kukuba nelikhwazayo kwaye ucacile. Kodwa i-Internet. Ke enamandla ngakumbi real ukuba awuyazi Jikelele - yenza free Dating site kwi nje imizuzu embalwa Emzantsi Carolina. Kwi imizuzu embalwa, uqinisekile ukuba sele a elitsha, ngenxa yokuba ingaba nokubhalisa. A iphepha lemibuzo malunga iya kuvela kunye inani elikhulu ka-Windows. I-imbono bonke abasebenzi bethu ukuba ahlangane ezinzima abantu - abantu abo ufuna ukufumana umtshato, abantwana, kwaye ngaphezulu. Xa ufuna omnye abaninzi abaphenduli, ungummi umsebenzisi we Dating site. Ezilungele kuba lo mntu ixesha, imilo, ubuso imilo, iinwele umbala kunye nezinye parameters:"Numerous questionnaires ukufunda, umxhasi kufuneka ukuchonga ngokwakhe, unako ukwenza into ofuna iya kuba ngokufanelekileyo. Izawuba elide incoko, ngathi abanye abantu. Ngale ndlela, kuba abantu andazi yokugqibela Congress kakuhle kakhulu. Abanye, imini emva imihla. Umntu kufuneka akwazi zithungelana kunye onesiphumo ngokwembalelwano ukusuka intermediate ukuba non-imihla ngemihla. Kwisahluko sesibini ileta yakho phupha ukukhangela Dating impumelelo, kuquka abaninzi scammers, South Carolina Dating zephondo. Baninzi scammers phandle phaya, kuquka kwi abaninzi emzantsi Afrika Carolina Dating zephondo. Nangona kunjalo, yoko yaba olahliweyo. Kule meko, kufuneka zithungelana neqabane lakho amava ngeli xesha.
Oko akuthethi ukuba zithetha uphumelele khange kuba okulungileyo umhlobo wonke umntu abo ixhasa kuwe. Le meko rhoqo POPs up. Abaninzi amadoda nabafazi bonisa iziphumo apha kuphela ngenxa uthando. Akunyanzelekanga ukuba ufuna ukuhlala nani. Ndiyabulela kuba ethabatha ixesha. Amava ka-hayi ekubeni ukuya kwi-kwaye ngaphandle ngu chu ekubeni shattered.
Ukongeza, uzakufumana phandle phaya kuba free into okanye apho bonke bethu Dating iinkonzo ingaba wanikela.
Siza uthando, kuba abahlobo, uthando. Isazisi, unxibelelwano, iziganeko
Munich Clairvoyant, Witch, Magician
kweminyaka ye-ibhinqa Balzac- ubudala-kuhle zilondolozwe kwaye nkqu kukhokelela edibeneyo ezolonwabo, makhaya umdla iindawo, njalo-njalo.kuba abanjalo males abakhoyo ukucinga i-internship
Kweminyaka eli ibhinqa Balzac- ubudala-kuhle zilondolozwe kwaye nkqu kukhokelela edibeneyo ezolonwabo, makhaya umdla iindawo, njalo-njalo.kuba efanayo males ukucinga i-internship.
Njengokuba clairvoyant, ubona ukuba ingxaki kwaye sombulula ngcinga. Njengoko a witch kule dolophana, kulula ukuba ibandakanye umsebenzi usiyazi ukuze kutshatyalaliswe iinjongo diagnostic kwiimeko, iintlobo ezahluka-hlukileyo umonakalo, amulets"talismans", punishments.contender, sorceress, magician. contender, sorceress, magician.
Indlela a warlock ingaba witchcraft kwi dolophana witchcraft ingaba lula ukwenza, ukususa izinto diagnostic kwiimeko, iintlobo ezahluka-hlukileyo umonakalo, amulets"amulets", isohlwayo. Amandla ritual ka isicelo, intlawulo isipho, ndine ukwenza umsebenzi isixa esithile onzulu amandla, ngaphandle kwentlawulo. Nje usiyazi imisebenzi kunye demons, ngoko ke ukwenza imiphefumlo lwabafileyo, kwaye ngoko ke, ingaba na impiety. Umntu iingcinga, aninakwenza nto. Kukho kwakhona ezininzi unconsciousness ukuba unako ukusoloko tracked. Ndingumntu cwaka osekwe tshintsha msitho. Ngokwenza kwaye integrating wam uqeqesho, kukho umlingo ehlabathini. Ukuba ufuna nayiphi na, nceda uqhagamshelane kum. Yamkela imali kwaye izipho weza aboard i-umlingo umsebenzi. Uqala uhambo lwakho kwi khangela abantwana ubudala phantsi umfazi lowo ufuna ukuphila ngokusisigxina kulo Munich MA phezu ubudala, kodwa kanjalo kwi sporting uluvo humor, imisetyenzana yokuzonwabisa kwaye Communal ubomi a ezinzima budlelwane, uyakwazi yiya kwi warmth kwaye novuselelo a umbhali kwezinye enkulu izixeko. I-uhambo kuthatha indawo kwi-befuna abantu phezu ubudala constantly ukusuka Munich ukuba abafazi phantsi abakhoyo okulungileyo e imisetyenzana yokuzonwabisa indlela emidlalo evakalayo kwaye uluvo humor, abantwana phantsi ukwenza Godalka Seraphim eshushu kwaye cozy kwi ezinzima budlelwane kwaye cohabitation ekhaya get-Intanethi ubuqu psychic tarology attack: Umntu kufuneka ube isebenziseke amava kulo mhlaba. Ritual spells, divination. Usapho luthando. Thoroughly ikhangelwe kuba urhwaphilizo, bazalwana uthando. Umnxeba okanye bhala into.
Psychic attack ka-tarragon.
kunye umntu kunye isebenziseke amava. Ritual spells, divination. Khangela ngenyameko kuba urhwaphilizo, bazalwana uthando. Umnxeba okanye bhala into. ukususela umntu lowo ufuna ukuphendula kakuhle ukwakhiwa intsimi mini iminyaka engama-beautiful abafazi - iminyaka engama-Germany kwaye Austria. Ngokuqinisekileyo.
Mna kanjalo ufuna impendulo ukwakhiwa emidlalo ekufuneka intlanganiso beautiful isijamani abafazi ubudala kwaye abantu - ubudala - Germany kwaye Austria.
Ndiya kuba ndonwabe ukunceda wena ukusombulula complex iingxaki kwaye ngenyameko cinga uthando lwakho usapho lwakho, umsebenzi kwi-Intanethi, njalo-njalo. umgama, umonakalo, amehlo ngenxa yobubi. Ekuvuleni iyacofeka road, clearing ukusebenza.
Ukususa drunkenness ukusuka isombulula iingxaki, impurities ubuyisela uthando umlingo Jikelele isisombululo"iliso, umyeni, susa rivals, i umoya omdakaname nguye Uthixo wothando, ukukhuselwa, ukususela umlingo umlingo-ziya kukunceda ukusombulula iingxaki, usapho, umsebenzi yokususa inkunkuma, umonakalo, uthando i iliso ebubini thoroughly tested".
Vula road, uhlambe ukusebenza. Ekupheliseni drunkenness ukusuka ingxaki isombulula, impurity ubuyisela uthando umlingo ukuya kwinto yonke isisombululo ka-umyeni wam ngu"amehlo", susa wam rivals, i-demonic Uthixo wothando, kwempembelelo yomoya protective umlingo umlingo.
Ophezulu Caucasian abafazi bhalisa kwi-ubudlelwane site
I-intanethi Dating kwaye omdala abafazi Verkhnyaya Hava ezinzima budlelwane nabanye kwaye yenkcubeko unxibelelwanoPrivate imiyalezo, iifoto, kwaye ifowuni amanani bahlala ngokukhululekileyo ezikhoyo kuba kunokwenzeka. I-intanethi Dating kwaye omdala abafazi Verkhnyaya Hava ezinzima budlelwane nabanye kwaye yenkcubeko unxibelelwano. Personal iimbali, iifoto, kwaye ifowuni amanani bahlala free ukubonisa.
Akukho lioness kwi-bale mihla Spain, le asiyiyo oko
Ndine chicken Turkey kwaye u-izinja
Akukho lioness kwi-bale mihla Spain, le asiyiyo oko kulindelweLadies, khumbula, andikho elijongene ukufunda, mna ngokwenene yaye oko, mna ephekiweyo kuyo.
Ndiza ngako oko.
Ndicinga ukuba nityhile emaphandleni ngaphandle koloyiko yabasetyhini, abantu abo ufuna umnxeba. Ngu beautiful lizwe.
Ndicinga ukuba isiphumo, enyanisekileyo Vlad, ingaba zithe ezahluka-hlukileyo ukuba ubune ebhaliweyo ukuba ndinguye ngoku Mariupol. Andinguye a ipropati, namhlanje uza bhalisa kwi-zethu kwi-intanethi kwiphepha for free. inkangeleko kuba abantu kunye osisigxina yokuhlala kwaye abantu kwi-Spain apha. Ngoko bhalisa ukufikelela kwaye incoko kunye abantu kwaye abantu hayi kuphela kwi-Spain, kodwa kanjalo kwamanye amazwe jikelele ehlabathini. Ukuba ufuna ukuya kuhlangana kwaye yenza uthando, enew acquaintances, abahlobo, kwaye kwangoko Dating zephondo ingaba ulinde wena.
Uthando Dating ezinzima Dating for umtshato. I-ezinzima Dating iwebhusayithi uthando Dating lijolise ukunceda abantu ikhangela a ezinzima budlelwane kwaye ufuna ukudala usaphoukufumana ubomi babo iqabane lakho ngendlela eyobuhlobo kwaye glplanet atmosphere. Siya kuhlawula utmost ukubaluleka ukuba ulawulo questionnaires. ngaba ukujonga ngaphandle abasebenzisi abo ekuvunyelwene ngawo i-atmosphere kwaye funa non-osisigxina budlelwane nabanye kwaye iintlanganiso. I-ezinzima Dating iwebhusayithi uthando Dating Wokuqala kwi-intanethi Dating inkonzo ukukhangela a ezinzima budlelwane. Akukho ngenyanga imirhumo. ngenyanga kwaye rhoqo intlawulo. Engqongqo yolawulo questionnaires yenza uluntu abantu United ngo imbono ingxowa-a ubomi iqabane lakho. Low iindleko omnye-ixesha indawo zabucala. Ukuba ufaka oza kufumana ubomi iqabane ukungena kwethu. Bhalisa ukuba Ngaba Ngenene ikhangela a ezinzima budlelwane kwaye uzimisele ukwenza usapho Ukudinwa ka-indecent iziphakamiso kunye questionable profiles kwezinye zephondo Ufuna ukuba incoko kwi Dating site kokuba akukho rhoqo. obligatory neentlawulo Baye bagqiba ukwenza iphepha lemibuzo malunga ne-real data malunga ngokwabo kwaye zabo real iifoto Ilungele qinisekisa i-seriousness zabo intentions yi-activating i iphepha lemibuzo malunga.
tiểu thuyết xuyên không Zürich (Thụy Sĩ)
free omdala dating ividiyo Dating site free i-intanethi free ividiyo intshayelelo ividiyo Dating Moscow ividiyo Dating nge kubekho inkqubela kuba free i-intanethi ividiyo ukuncokola nge-girls dating site ngaphandle ubhaliso zephondo Dating ividiyo abafazi ukuphila umsinga guy esisicwangciso-mibuzo roulette kubekho inkqubela-intanethi ngaphandle ubhaliso